Gmail ထဲကို Twitter နဲ့ Facebook သွင်းမယ်။ - MYSTERY ZILLION
Gmail ထဲကို Twitter နဲ့ Facebook သွင်းမယ်။
February 2010 edited February 2010 in My Article
ကိုယ့် Gmail ထဲကို twitter နဲ့ Facebook ကိုဘယ်လို့ထည့်ထားမယ်ဆိုတာလေးပါ ။ မေးစစ်ရင်းနဲ့ Twitter နဲ့ Facebook က Update တွေကို စစ်လို့ရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ် ။ အောက်မှာ တစ်ဆင့် ချင်းဆီ ကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ် ။
အဆင့် ၁ ။ သင့် Gmail ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ ။
အဆင့် ၂ ။ Gmail Labs (not Google Labs) ကိုသွားပါ ။ Gmail ထဲက Setting ကို နှိပ်ပြီး Labs ကိုသွားလို့ရပါတယ် ။
အဆင့် ၃ ။ Labs ထဲရောက်ရင် အောက်ဆုံးနားလောက်အထိ Scroll ဆွဲချလိုက်ရင် “Add any gadget by URL” ဆိုတာလေးကို Enable လုပ်လိုက်ပါ ။
အဆင့် ၄ ။ ပြီးရင် Save Changes လုပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၅ ။ ပြီးရင် Gmail Setting ထဲက Gadgets ကိုသွားလိုက်ပါ ။ပြီးရင် Addagadget by its URL: မှာ “https://twittergadget.appspot.com/gadget-gmail.xml"(copy link address လုပ်ပါ ။မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့) ပြီးရင် Paste လုပ်ပြီး Add လုပ်လိုက်ပါ ။
အဆင့် ၆ ။ ပြီးရင် inbox ကိုသွားလိုက်ပါ ။အောက်က ပုံလေးအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ် ။
ပြီးရင်တော့ Click here ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး အောက်က ပုံအတိုင်း Username နဲ့ Password ရိုက်ပြီး Allow လုပ်လိုက်ပါ ။
အဆင့် ၇ ။ ပြီးရင် Gmail Inbox ကိုပြန်သွားပြီး Click here to reload page ကို နှိပ်လိုက်ပါ ။ ကဲအောက်က ပုံတွေလို ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Update တွေ Twitt တွေ တင်လို့ရပါပြီ။
ကဲအားလုံးရှင်းပါတယ်နော် ။ ကျွန်တော်နောက်ထပ် အဲလိုမျိုး Facebook ကိုဘယ်လို သွင်းမလည်းဆိုတာ ဆက်ပြောပါ့မယ်။
အဆင့် ၈ ။ Facebook ကိုသွင်းဖို့ Gmail Setting ထဲက Gadgets ကိုသွားလိုက်ပါ ။ပြီးရင် Addagadget by its URL: မှာ “http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/104971404861070329537/facebook.xml"(copy link address လုပ်ပါ ။မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့) ပြီးရင် Paste လုပ်ပြီး Add လုပ်လိုက်ပါ ။
အဆင့် ၉ ။ ပြီးရင် inbox ကိုပြန်သွားပြီး အောက်က ပုံအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ ။ သင့် Gmail ထဲကနေ Facebook ရှိ update များကို စစ်လို့ရပါပြီ ။
ကဲ အားလုံးကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
Credit To >>>
အဆင့် ၅ ။ ပြီးရင် Gmail Setting ထဲက Gadgets ကိုသွားလိုက်ပါ ။ပြီးရင် Addagadget by its URL: မှာ вЂњ[url]https://twittergadget.appspot.com/ga...mail.xmlвЂќ(copy[/url] link address လုပ်ပါ ။မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့) ပြီးရင် Paste လုပ်ပြီး Add လုပ်လိုက်ပါ
Invalid gadget specification. Ensure URL is correct and the gadget does not contain errors.
humantergets wrote: »
ဆောရီးညီ LINK ထည့်တာမှားသွားလို့ပါ ။... ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ... လင့်ထဲမျာ "(copy ဆိုတာလေးပါနေလို့ပါ ...
အကိုရ..facebook လည်း လုပ်ရင် ကို humantergets ပြောတဲ့ error ကြီးပေါ်နေတယ်ဗျ။ လုပ်ပါဦး။ကျနော် ဘယ်နေရာမှာ မှားနေလဲ မသိဘူး။
http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/104971404861070329537/facebook.xml အဲဒီ link ကို copy လုပ်ပြီး Add လိုက်ပာ ။
ခုလိုစိတ်၇ှည် ရှည်လေးထားပြီးဖြေတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင် ပါတယ်
အကိုရေ..မရသေးဘူးဗျ။အကိုပြောတဲ့ အတိုင်း labs လည်း enable လုပ်တယ်။ link အသစ်လည်း gadgets မှာ add တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟို invalid ့URL ဆိုတာကြီးပဲ ပြပြနေတယ်။လုပ်ပါဦး။ ဟီး ..နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်သလိုဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူး။
ကျွန်တော်လည်း အရင် က မရပါဘူး...
ဒါပေမယ့် ခုတော့ ရသွားပြီ...ကျွန်တော်တုန်းကလည်း ဘာလို့လည်းတော့မသိဘူးဗျ..အစ်ကိုလိုပဲ error ပြ နေတာ ..
ကျွန်တော် ရတာ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ အဲ့ error ကို google မှာ ၇ှာပါတယ်...ရှာတော့ အဲ့ဒီမှာ ဒီလိုပဲ Rememberthemilkထည့်တာကို တွေလို့လုပ်ကြည့်ပါတယ်..ထည့်တာ အဆင် ပြေပါတယ်..နောက် အဲ့ဒါလည်းရ ရော..ဒီက အစ်ကို ပြောတာကို မရတာ သိပ် မ ကျေနပ်လို့ ပြန်လဲထည့်ကြည့်တော့ ရသွားရောဗျာ....
ကျွန်တော် ပြောတာရယ်စရာဖြစ်နေ မလားတောင် မသိဘူးနော်...
အစ်ကို လည်းစိတ်၇ှည် ရှည်ထားပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ ရသွားပါလိမ့်မယ်...
အားလုံးကို ကြားထဲကနေဗဟုသုတရသွားလို ့လေ
ဒီအတိုင်း တစ်ခုချင်းစီတောင် မျက်စေ့အတော်နောက်တယ် အဲဒီ့သုံးခု တစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ မတွေးရဲစရာပါပဲ အလုပ်လုပ်ချိန်တောင် ရှိပါဦးမလားဟင်။ ကြည့်ရတာ ပေါက်ပေါက် ဒီလိုအကုန်စုပြီး အသုံးချနေပုံရတယ် တစ်ခါတစ်လေ ဟုတ်ဘက်ဒီဘက် အကုန်လုံး အပြိုင်ကိုတက်လာတယ်။
ဟုတ်တယ်နော်ခုဆိုရင်လေ buzz တွေကော facebookတွေကောဒါတောင်twitterမပါသေးဘူးနော်ထည့်တာအဆင်မပြေလို ့အဲ့လိုသာဆိုလို ့ကတော့